Thursday January 07, 2021 - 19:31:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Melleteriga suudaan ayaa ku dhawaaqay in shalay ay iska caabiyeen laba weerar oo uga yimid ciidanka Itoobiya, ilo wareedyo caskari ah ayaa usheegay saxiifadda Suudaan Tariibiyoon in ciidanka suudaan ay iska caabiyeen weerar ay soo qaadeen ciidamada ismaamul goboleedka Amhara ayna gacanta ku dhigeen mid kamida ciidamadii weerarka soo qaaday.
Mandiqadda Sariba oo ah goobta uu ka dhacay isku dayga weerar ee ka yimid ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay in ay difaacdeen ciidamada xukuumadda Khurduum sida ay sheegayaan saraakiisha suudaaniyiinta ah.
Afhayeen diiday in magaciisa la adeegsado oo u hadlay Suudaan ayaa carabaabay in kooxaha weerarka soo qaaday ay adeegsadeen hubka culus, weeraradan ayaa imaanaya xilli melleteriga suudaan ay dib ula wareegeen mandiqadda Alfashaqah oo 25-kii sano ee lasoo dhaafay ay haysteen dad kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada.
Dhinaca kale dagaallo culus ayaa lagasoo sheegayaa waqooyiga itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray, jabhadda mucaaradka TPLF ayaa ku dhawaaqday in ay dishay in kabadan 100 askari Itoobiyaan ah oo uu kamid yahay sarkaal sare.
Col.Gabra Sidiiqi oo uhadlay TPLF ayaa usheegay warbaahinta in ciidankoodu ay dileen inkabadan 120 askari, saraakiisha qowmiyadda Tigreeg waxay ku faaneen in weerar ay ka geysteen hareeraha magaalada Abraha Atsbeha ay kusoo afjareen boqolaal askari.
ilo wareedyo waxay sheegayaan in dagaalyahannada Tigreega ay kulaalayaa degmada Hadse halkaas oo ay si xun ugu gummaadeen ciidamada dowladda Abiy Axmed.
Sidoo kale dib udhac weyn ayaa lagasoo sheegayaa jabhadda dagaalka Maqalle, ciidamada Federaaliga Itoobiya ayaa faarujiyay dhowr deegaan oo Maqalla hoos yimaad halkaas oo ay dib ula wareegeen ciidamada jabhadda TPLF.
Melleteriga Itoobiya oo umuuqda in uu ka cararayo khasaare hor leh oo kasoo gaara weerarada Tigreega ayaa magaalooyinka waaweyn difaacyo adag kasoo xiranaya, hoggaamiyaasha TPLF oo howdka ka jabhadaynaya ayaa faray dhammaan taageerayaashooda in ay dagaalka ka wadaan meel walba oo ay Itoobiya uga suganyihiin.
iyadoo sidaas uu xaalku yahay oo dagaalka jabhadayska ah uu wali sii socdo ayaa lasoo sheegayaa in kumanaan kun oo barakacayaal ah ay kusii qulqulayaan xadka suudaan.
hay'adda UNHCR oo arrimaha qaxootiga uqaabilsan waxa loogu yeero Q.Midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in wax isbedel ah uusan ku imaan qulqulka dadka dirirta kasii firxanaya ee gudaha ugelaya wadanka suudaan.